ခြောက်လပြည့်မွေးနေ့မှာ ... သားသားလေးစွမ်းထက် ကျန်းမာချမ်းသာပြီး အသက်ရာကျော်ရှည်ပါစေ။
မိဘကို ကျေးဇူးဆပ်နိုင်တဲ့ သားကောင်းရတနာလေးဖြစ်ပါစေလို့
ဦးဦး CMS ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
သားသားလေးစွမ်းထက် ... တကယ်ဆိုရင် မင်းကိုမွေးတာ မနက်ဖြန်ရောက်မှ ၆လပြည့်မှာ။ ဒါပေမဲ့ ဦးဦးCMS ဒီနေ့ကတည်းက ကြိုပြီးဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ မင်းဟာ တကယ်ထူးခြားတာပဲ။ မွေးတာက April 1 ရက်နေ့။ မျက်နှာလေးက အေးချမ်းတည်ငြိမ်ပြီး ဂျီလည်း မကျတတ်ဘူး။ ဘယ်သူပွေ့ခေါ်ခေါ် မငိုတတ်ဘူး။ မင်းလို ကလေးမျိုးကတော့ တကယ်ရှားတယ်။ မင်းရဲ့မေမေနဲ့တူတာလား ဒါမှမဟုတ် မင်းရဲ့ဖေဖေနဲ့တူတာလား။ ဦးဦးတော့ သေချာပေါက်မပြောတတ်ဘူးကွ။ ပြောတာမှားသွားရင် ဦးဦးဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်။ ဒီတော့ မင်းရဲ့မေမေပဲ သိလိမ့်မယ်ထင်တယ် :)
ရွှေတိဂုံဘုရားကို ပုံစုံယူပြီးတည်ဆောက်ထားတာပါ။ Global Pagoda လို့နာမည်ပေးထားပြီး အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဘုံဘေမြို့ရဲ့မြောက်ဘက်ပိုင်းမှာတည်ရှိပါတယ်။ တည်ဆောက်မှုအားလုံးနီးပါး ပြီးစီးနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ Land Mark တစ်ခု တစ်ခြားနိုင်ငံကို ရောက်သွားပြန်ပြီပေါ့ဗျာ။
Global PagodaModern Wounder of The WorldWorld's Largest Stone Dome Risesဒီအကြောင်းကို Mandalay Google Group မှာ ဖော်ပြပေးတဲ့ ကိုထိန်လင်းကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
သီတဂူဆရာတော် အရှင်ဥာဏိဿရ (Ph.D, D.Litt) ၏ နာဂစ်မုန်တိုင်းဘေး ကယ်ဆယ်ထောက်ပံ့ရေး အထူးတရားပွဲများကို အင်္ဂလန်နိုင်ငံတွင် အောက်ပါဌာနများ၌ အသီးသီးကျင်းပမှာဖြစ်ကြောင်း ဓမ္မမိတ်ဆွေ ရွှေမြန်မာအပေါင်းအား အသိပေးကြေငြာအပ်ပါသည်။
Santi Sukha Vihara
7.30 pm, 26th September, Friday
1.00 pm, 27th September, Saturday
Hanwell, Ealing, London
2-30 to 4.30 pm, 28th September, Sunday
news via : myanmarnet
နေ့တစ်နေ့ရဲ့ နိဒါန်းဖြစ်တဲ့ မနက်ပိုင်း နေ၀န်းနီနီလေးကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ နန်းရှေ့ဘက်ကနေ အရင်ဦးဆုံး မြင်တွေ့ရပါတယ်။ မနက်ပိုင်းဆိုရင် နန်းရှေ့ဈေးကြီးထဲမှာ နံနက်ခင်းရဲ့ သင်္ကေတတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဈေးသည်တွေရဲ့ ဈေးခေါ်သံတွေကိုလည်း ကြားနေရတတ်ပါတယ်။ ရန်ကင်းတောင်၊ ပုသိမ်ကြီးဘက်…
ကျွန်တော်တို့ လောကကြီးထဲ လူဖြစ်စဉ်ခဏမှာ သတိမေ့နေတာလေးတွေပါ။ ဒီလူကွာ အရမ်းချမ်းသာတယ်။ သူ့လို ချမ်းသာပြီး ပြည့်ပြည့်စုံစုံနေနိုင်ရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲ။ ကားကလည်း အကောင်းစားကြီး။ အိမ်ကြီးကလည်း ဟီးလို့။ ရွှေတွေ ၀တ်ထားတာကလည်း ၀င်းအိလို့။ လကုန်လို့ payslip ကြည့်လိုက်ရင် ဂဏန်းလေးတွေကလည်း လှနေတာပဲ။ ကျွန်တော်အပါအ၀င် လူတစ်ချို့ တစ်ခါတလေမှာ ထိုကဲ့သို့ ငြီးတွားတတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အရေးအကြီးဆုံး တစ်ချက်ကို ကျွန်တော်တို့ မေ့နေကြတယ်။ အဲဒါကတော့ အပေးအယူပါပဲ။
သူတို့တွေချမ်းသာနေတာ အဆင်ပြေနေတာတွေကိုပဲ မြင်ပြီး သူတို့ အဲလို ဘ၀မျိုးရောက်အောင် ဘယ်လိုကြိုးစားခဲ့ရတယ်။ ဘာတွေပေးဆပ်ခဲ့ရတယ် ဆိုတာကို အမေ့ကြီးမေ့နေမိတယ်။
အောင်မြင်မှုဆိုတဲ့ အသီးအပွင့်ကောင်းတွေကို ရဖို့အတွက် ပေးဆပ်ခြင်းဆိုတဲ့ မျိုးစေ့တွေ၊ မြေသြဇာတွေကို သူတို့ ကြဲခဲ့ရတယ် မဟုတ်လား။
ဒါနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး ကျွန်တော်တွေ့ကြုံခဲ့တာလေးကို မျှဝေပါဦးမယ်။
UK မှာရှိတဲ့ တစ်ချို့ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲလုပ်တဲ့နေရာတွေမှာ ရှာထိုး ဦးထုပ်ဆောင်းပြီး ၀င်ခွင့် မရှိဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော် အဲဒီနေ့မှာ ဦးထုပ်ဆောင်းသွားမိတယ်။ ဒါနဲ့ ပစ္စည်းအပ်တဲ့နေရာကို သွားလိုက်တယ်။ အဲဒီနေရာမှာ ပစ္စည်းထိန်းသိမ်းပေးတဲ…
Two cool free stuff sites for Graphic and Web Designers
Artshare.ruဒီဆိုဒ်ထဲမှာတော့ vector girls, icons, cliparts, photos, wallpapers, silhouettes of people, styles and brushes စတာတွေကို Download ရယူနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးကတော့ အဲဒီဆိုဒ်ထဲက Photoshop Brushes တွေပါ။
Designus.com ဒီဆိုဒ်လေးလဲ Design နဲ့ပက်သက်ပြီး resources တွေ တော်တော်များများကို တင်ပေးထားပါတယ်။ Brushes, icons, inspiration, miscellaneous, photostock, reviews, royalty-free, shapes, tutorials, vector and wallpapers စသည်ဖြင့်ပေါ့။ အကြိုက်ဆုံးကတော့ Tutorial section နှင့် Photo Stock section ပါပဲ။
Design ၀ါသနာပါသူများ လေ့လာအတုယူ အသုံးပြုဖို့ရာ မျှဝေလိုက်ရပါတယ်။
" အနာဂတ်မှာလည်း အောင်မြင်မှုတွေ ဆက်တိုက် ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ "
ဒါပေမဲ့ ခင်လို့ တစ်ခုတော့ ပြောပါရစေ ဦးမျိုး
" အရေးကြီးတဲ့ လူမှုရေးကိစ္စတွေအတွက် အချိန်ပေးတတ်အောင် ကြိုးစားပါဦး"
Thumbnail Images for Photoshop PSD files in Window XP and Vista
Photoshop ver.7 တုန်းက Folder တစ်ခုထဲမှာရှိတဲ့ photoshop file တွေကို browse လုပ်ရင် thumbnail view ပေါ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ver.7 နောက်ပိုင်းမှာတော့ adobe ကနေ thumbnail အတွက်ရေးထားတဲ့ dll file နဲ့ window xp conflict ဖြစ်တာကြောင့် အဲဒီ ability ကို ဖြုတ်ချလိုက်ပါတယ်။
Manually အားဖြင့် Thumbnail ပေါ်အောင် photoshop ထဲမှာပါတဲ့ Adobe Browser နှင့်လည်း ကြည့်လို့ရသလို Third party tool တွေဖြစ်တဲ့ Irfan View ဒါမှမဟုတ် Thumb View Lite တို့ကိုလည်းအသုံးပြုပြီးတော့ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် photoshop file တွေကို folder explore လုပ်ပြီး thumbnail view ကြည့်ရတာပဲ ကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ အောက်ပါနည်းအတိုင်း ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
XP user1. Close Photoshop
2.Download the file, photoshop_thumbnails.zip (62kb)
3. Copy psicon.dll to C:\_Program Files\_Common Files\_Adobe\_Shell - if this folder doesn't exist create it
4. Run Adobe.reg
5. You now can view PSD files in Thumbnails view within Windows Explorer.
Vista user1. Close Photoshop
2. Download the file, photoshop_thumbnails.zip (62kb)
3. Copy psicon.dll to C:\_Program Files\_C…
ဘုန်းဘုန်းဦးဥတ္တရမှ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုကပွဲကျင်းပရသည့် ရည်ရွယ်ချက်နှင့် ရန်ပုံငွေရှာဖွေမှု့အကြောင်းတို့ကို အမိန့်မှာစကား မိန့်ကြားပါတယ်။ ထို့နောက်မှာတော့ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုကို နိုင်ငံခြားရောက် မြန်မာများထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်သင့်ပုံ၊ အမျိုးဘာသာ သာသာနာကို ချစ်ခင် စောင့်ရှောက်သင့်ကြောင်းတို့ကို သတိပေးစကားတို့နှင့်တကွ မိန့်ကြားတော် မူပါတယ်။ လူငယ်အများစုဟာ သူများဂီတ(အနောက်တိုင်းဂီတ)ကို မြိန်…